Argentina ruo ọhụrụ Ngwuputa iwu a izu - China JP Metal & Equipment
Ekwentị: + 086-010-88696156
Kwụ Slurry mgbapụta
AH Metal agbakọta Slurry mgbapụta
AHR Rubber agbakọta Slurry mgbapụta
HH High Pressure centrifugal mgbapụta
L Metal Light ọrụ Slurry mgbapụta
M Metal Slurry mgbapụta
ZJ Myọcha Press Ịnụrụ mgbapụta
ZGB High Performance Slurry mgbapụta
Vetikal Slurry mgbapụta
SP (R) Series sump mgbapụta
40PV-SP echebe Drive sump mgbapụta
65QV-SP Vetikal sump mgbapụta
100RV-SPR Rubber sump mgbapụta
250TV-SP sump mgbapụta
Aja (Ajịrịja nkume) mgbapụta
G na GH Series mgbapụta
6 / 4D-G Ajịrịja nkume mgbapụta
8 / 6E-G Aja mgbapụta
10 / 8F-G Aja mgbapụta
12/10 G-GH Ajịrịja nkume Aja mgbapụta
18 / 16G-G Ajịrịja nkume Aja mgbapụta
450WN Dredge mgbapụta
500WN Dredge mgbapụta
700WN Dredge mgbapụta
2QV-AF froth mgbapụta
4RV-AF froth mgbapụta
TL (R) Series FGD mgbapụta
Dt Series FGD mgbapụta
Slurry mgbapụta Parts
Polyurethane Ihe eyi Parts
A05 High Chrome Alloy eyi Parts
Rubber Ihe eyi Parts
Argentina ruo ọhụrụ Ngwuputa iwu a izu
Argentine ọchịchị, ụlọ ọrụ Player na ịlụ na-atụ anya banye n'izu a a ogologo na-echere gọọmenti etiti Ngwuputa nkwekọrịta ahụ na-emekwa ẹdude iwu gafee mba, dị ka akụkụ nke na-aga n'ihu mgbalị iji na-awụlikwa elu-amalite ego na oru.
The mba, otu ugboro a mmasị nke Ngwuputa investors, adawo n'azụ ya agbata obi Chile na Peru n'agbanyeghị nwere ọgaranya ego ọla kọpa, gold, ọlaọcha na zinc.
Ruo ugbu a, obodo ụkpụrụ abụghị nanị ndị siri ike, ma na-iche iche, na asaa nke mba 23 anāchi achi na-enwe a zuru ban na ojiji nke cyanide n'elu ka gburugburu ebe obibi na-akpata nchegbu.
Ebe ọ bụ na-ewere ụlọ ọrụ dị na mbubreyo 2015, President Mauricio Macri e n'ịkpa jikoro aka ịtụte mba Ngwuputa ụlọ ọrụ. Otu n'ime ihe mbụ ndị e iwepu a 5% tax on Ngwuputa na ume ụlọ ọrụ February afọ gara aga.
Ọ na-kagburu a ukpan ke mba ọzọ na Ngwuputa ụlọ ọrụ na-ezipụ uru mere na Argentina si n'ala.
Ugbu a, ya ochichi bụ banyere ruo a mba Ngwuputa iwu na-enwe olileanya na kpuchie ụzọ Macri kasị oké ọchịchọ mgbaru ọsọ - abụọ ulo oru mbo ke oru na $ 25 ijeri na afọ asatọ.
N'okpuru gara aga President Cristina Fernandez, onye na ụba obodo si ọrụ , Argentina natara naanị $ 10 ijeri maka 2007-15 oge. N'otu afọ, Chile si Ngwuputa investments totaled $ 80bn na Peru si $ 52bn.
The iwu ọhụrụ, obodo akwụkwọ La Mkpebi Austral akọ (na Spanish), na-azọrọ na e-enye tax kwụsie ike na investors, enyere zere agha na obodo ọchịchị na-emeri ihe karịrị nkwado nke obodo maka na Ngwuputa, n'ụzọ dị otú ahụ dị ka ndị gara aga ọchịchị mere na mmanụ ụlọ ọrụ. Ma nnyocha na ọtụtụ BMI Research na aka nke na-eru nso ize ndụ na ike igbochi Mecri atụmatụ:
"Ọgwụgwụ karịa anya Q117 aku data-atụ aro njem ide ihe ize ndụ anyị amụma n'ezie GDP uto nke 3.1% na 20 17 na-ekwe omume nke iwu nke nādaghachi azu ga imebi ibu nwere," ha na-ede. "Ọ bụrụ na organic ibu anaghị mee na-abịa abịa ọnwa, Macri si mmekota nwere ike ebelatawo na October ufọt ufọt okwu ntụli aka, nke nwere ike ịhụ aku atumatu anụ ọhịa n'ebe ọzọ interventionist atumatu nke ya ụzọ (...) Na usoro nke na Ngwuputa ụlọ ọrụ, ọ bụla mgbanwe n'ebe Macri azụmahịa friendly mgbanwe ga-igbochi ego na ejighị ihe n'aka-eduga n'etiti afọ-okwu ntụli aka ga-abụ na oge ụfọdụ ikpeazụ ego mkpebi. "
Ọtụtụ BMI si ọkachamara na-ekwu na ndị ọzọ n'ihe ize ndụ ga-esi na ụba nnyocha nke miners 'mmiri ojiji, nke yiri ka imubanye esemokwu n'etiti ụlọ ọrụ na obodo na-eduga ndị ọzọ ụkpụrụ.
"Ka anyị na-atụ anya na-elekwasị anya na-akwado Ngwuputa ụlọ ọrụ ibu na gọọmenti etiti larịị dechapụ n'ógbè mkpa, obodo mmegide na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nsogbu nwere ike na-afụ ụfụ Argentina si mma ka a na Ngwuputa ego aga," ọtụtụ BMI ekwubi.
Post oge: Ka-10-2017
Company: JP metal & Equipment Co., LTD
China kwuru na ọ ga-egwupụtakwa ...
China chọ ẹbọhọ nchegbu banyere ya ambitions na ịnweta-ọgaranya Antarctica on Monday, na ihe ukara okwu Bei ...
Argentina ruo ọhụrụ Ngwuputa la ...
Argentine ọchịchị, ụlọ ọrụ Player na ịlụ na-atụ anya banye n'izu a a ogologo na-echere gọọmenti etiti Ngwuputa ekweta ...